အွန်လိုင်းပေါ်မှ အခမဲ့ပညာရတနာသိုက်များ - Myanmar Network
Posted by Tin Nyunt on January 28, 2012 at 13:27 in ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ
မူကြိုမှသည် ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ပညာလမ်းကြောင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ရင် အလွန်ခက်ခဲ ပင်ပန်းတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်ပညာရေးက မိဘရော၊ ကျောင်းသားပါ အေးအေးသက်သာနေရတဲ့ခေတ်မဟုတ် ပါဘူး။ ပညာဆိုတာကို မရ ရအောင်ယူနေကြရတာကလည်း ပညာဗဟုသုတ အသိဥာဏ်ပြည့်ဝပြီး ဘ၀မှာရပ်တည်နိုင်အောင် ဆိုတာထက်၊ အလုပ်အကိုင်ရအောင်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ကများနေတာကလည်း ဘ၀င်မကျစရာပါ။ အစဉ်အလာပညာရေးရဲ့ လမ်းကြောင်းအဆုံးဟာ အလုပ်ဖြစ်နေပြီး၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဘ၀ရပ်တည်လို့ရသွားရင် ပညာဆိုတာ လမ်းဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ရပြီးချိန်မှာမှ ပညာ လမ်းကြောင်း ကို ပြန်သွားမယ်၊ ပညာပြန်သင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးတွေလည်း နည်းကြပါတယ်။ ပညာအခွင့်အလမ်းဆိုတာ ယူချင်ရင်ရနိုင်တဲ့၊ ယူချင်သူကို ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကို ဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ ပညာရေးဆိုတာ အချိန် မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေး ရှာမှီးနိုင်အောင် စီစဉ်ထားရမယ်။
Permalink Reply by nannsz on January 30, 2012 at 13:52
Permalink Reply by Thet Paing Oo on January 30, 2012 at 14:19
Permalink Reply by Theik Theik Nyunt on January 30, 2012 at 14:39
Permalink Reply by 1b1zedxcnwez5 on January 30, 2012 at 14:59
Permalink Reply by winwin on January 30, 2012 at 15:33
Permalink Reply by 3r5as6gscwxcj on January 30, 2012 at 15:35
Permalink Reply by Dr Than Than Aye on January 30, 2012 at 15:37
Permalink Reply by May Zimmie Aung on January 30, 2012 at 15:54
Thank you sooooo much! Now I finally get to study my dream course! :)
Permalink Reply by 0lcobkbf6m4wl on January 30, 2012 at 16:05
Thanksalot !!!!! :D
Permalink Reply by Shwelayaung on January 30, 2012 at 16:23
Permalink Reply by Hla Phone on January 30, 2012 at 17:25
Permalink Reply by wahwahwin on January 30, 2012 at 20:08